၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Android Keylogger
နေအိမ် Phone Spy Android အတွက်အကောင်းဆုံး Keylogger ၁၀ ခု
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Keylogger ၁၀ ခု
လူအများစုက Facebook လှုပ်ရှားမှု၊ သူတို့၏ကလေးများသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ Facebook လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန် keylogger များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Android keylogger ကအကောင်းဆုံးကိုသုံးတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းအရင်မစဉ်းစားမိသေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးပေးတယ်။
သို့သော်၊ Android ဖုန်းများ (သို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများ) အတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်တွေ့ရှိသော keylogger အများစုသည်အမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောသူများထဲမှအများစုသည်သင်၏ system ကိုဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်စေပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုခိုးယူနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ Android keylogger ကိုနာရီပေါင်းများစွာရှာဖွေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်လည်းအဲဒီလိုကူညီနိုင်အောင်ဒီလမ်းညွှန်ကိုရေးခဲ့တယ်။ Android ဖုန်းခလုတ်များကိုစစ်ဆေးရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ထိပ်တန်း 10 ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုချင်းစီအလုပ်လုပ်တယ်၊ ထိပ်ဆုံးရှိအက်ပ်သည်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အချိန်ကိုမဆိုဖြုန်းတီးခြင်းမပြုဘဲ၊ စတင်ကြပါစို့။
အပိုင်း ၃: စပိုင်
အပိုင်း ၄: သူလျှို
အပိုင်း ၅: Cocospy
အပိုင်း ၆: Fami360
အပိုင်း ၇: Mspy
အပိုင်း ၈: မိုးမျှော်နာရီ
အပိုင်း ၉: စပဇီ
အပိုင်း ၁၀: Spybubble
အပိုင်း ၁၁: ဘယ် Keylogger ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ခြင်း
အပိုင်း ၁၂ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများ
Q: Android keylogger ကိုအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသလား။
Q: Android ဖုန်းတွင်ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ Android keylogger ကိုသုံးလို့ရပါသလား။
Q: စာရင်းထဲမှာပါတဲ့တခြား Android keylogger app တွေရှိသလား။
Minspy ဖြစ်ပါတယ် Android အတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှို app။ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံး Android keylogger ကိုရှာဖွေခြင်းကကျွန်တော့်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့တယ် Minspy, ငါထိုအချိန်မှစ။ ပိုကောင်းတဲ့ app ကိုရှာမတွေ့ပါ။ Minspy သည် Android နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက် keylogging ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ သင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးများကိုရှာဖွေနေပါက Minspy သည်သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
Minspy သည်သက်တမ်းအရင့်ဆုံး Android keylogger မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုတစ်ခုတည်းသောအရာဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Minspy နဲ့သင်ရရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့သော့ချက်မှတ်တမ်းကိုကြည့်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်ပါ။
Minspy ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်မှာ Keylogger module ၏လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
သင်သည် Minspy keylogger ကိုအသုံးပြုသောအခါတစ်စုံတစ် ဦး ၏သော့မှတ်တမ်းကိုကြည့်ရှုရန်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့် application ကိုမဆို download ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ Minspy ကိုသင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ဝဘ်ဘရောက်ဇာတွင်မဆိုဖွင့်နိုင်သည့်ဝေးလံခေါင်သီသော web dashboard မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ဤ web dashboard ကိုသင်၏ Minspy အကောင့်သို့အချိန်မရွေးဝင်ရောက်နိုင်သည် (သင်၌တစ်ခုရှိလျှင်) Minspy အတွက်မှတ်ပုံတင်ထား).
Dashboard တွင်၊ အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကိုဘယ်ဘက်ရှိသူတို့၏ tabs များမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအင်္ဂါရပ်အထူး tab ကိုရှိပါတယ်။ အင်္ဂါရပ် ၃၅ ခုကျော်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် Minspy နှင့်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာအတွက်အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
Minspy ဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထူးခြားချက်များမှာ -
Minspy သည်သင်၏ key logs များကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် target device ကို root လုပ်ရန်မတောင်းဆိုပါ။ ၎င်းသည် Android အတွက်အခြားမိုဘိုင်းလ် keylogger များနှင့်ကွဲပြားသည်။
သင်အရေးကြီးသောတစ်စုံတစ် ဦး ၏သော့မှတ်တမ်းများကိုသင်စောင့်ကြည့်သောအခါ၊ ဒါကြောင့် Minspy ကသူ့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒီဇိုင်းဆွဲထားတာကြောင့်လျှို့ဝှက်ဒေတာကိုသာသင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်မှာ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Minspy ဆာဗာများ၌ပင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ Minspy အဖွဲ့ကိုယ်တိုင်လည်း၎င်းကိုမမြင်နိုင်ပါ။ သင့်မျက်လုံးများအတွက်သာဖြစ်သည်။
Minspy ကိုအသုံးပြုရန်မည်သည့်ပရိုဂရမ်းမင်းဗဟုသုတမလိုအပ်ပါ။ Minspy ကိုစတင်သုံးစွဲသူအများစုမှပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ (သင်ပြီးသားလုပ်ထားသော) ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း။
Minspy ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာသည်သင့်အားလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သော့ချက်မှတ်တမ်းများသည်စာနယ်ဇင်းများကိုပြုလုပ်သည့်လျှောက်လွှာနှင့်အညီဖွဲ့စည်းသည်။ ၎င်းသည်သင်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများကိုဖယ်ရှားစဉ်သင်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်လိုသောသော့မှတ်တမ်းများကိုအလွယ်တကူစစ်ထုတ်နိုင်သည်။
Hide Android Keylogging
သင်သည် Android အတွက် Minspy keylogger ကိုအသုံးပြုသောအခါသင်ခြေရာခံသောမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်ဂရုပြုကြောင်းမည်သည့်အခါမျှမသိနိုင်တော့ပါ။ ၎င်းသည် Android ဖုန်းများအတွက် Minspy ၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Android keystrokes ၏မှတ်တမ်းကိုခြေရာခံရန်သင်ဖုန်းကို keylogging app တစ်ခုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည် Minspy သို့မဟုတ်အခြား keylogging application ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၎င်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ဒါပေမယ့် Android အတွက် Minspy ကိုသုံးတဲ့အခါဒီကန့်သတ်ချက်ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကဒီဒီဇိုင်းအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်
စတင်နိုင်ရန် Android အတွက် Minspy app အရွယ်အစားသည် ၂ MB အောက်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းထည့်သွင်းပါ။ ဤအရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့်ပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုသူများသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်သိုလှောင်ရာနေရာကိုမည်သည့်အခါကမျှသတိမပြုမိပါ။
ထို့အပြင် application ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက application icon သည်အသုံးပြုသူ၏ application menu မှပျောက်ကွယ်သွားမည်။ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ဖြင့်သင်အပလီကေးရှင်းကို (သင်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ) မည်သို့စတင်မည်ကိုသင်သာသိလိမ့်မည်။
ဤအပလီကေးရှင်းသည်အချိန်မရွေးအသိပေးချက်များမပို့ဘဲနောက်ကွယ်မှသာအလုပ်လုပ်သည်။ ဒီဇိုင်းကဘက်ထရီကိုမသုံးစွဲဘဲအလုပ်လုပ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်အခြားသုံးစွဲသူများအားသံသယဖြစ်ဖွယ်အရာတစ်ခုကိုမြင်စေရန်ဘာမှမရှိပါ။
အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုဖျက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုသင်ခံစားခဲ့ရပါက Minspy dashboard မှတဆင့်၎င်းကိုအဝေးမှမည်သည့် web browser မှမဆိုသင်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါဘယ်လောက်ကြီးလဲ
သင်ရရှိနိုင်သောအေးမြသည့်အရာများကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် Minspy အခမဲ့တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြစမ်းကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ Android keylogger solution ကို preview ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Minspy သည်အကောင်းဆုံး Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သူများတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ပြီးအခြားမည်သည့် app ထက်မဆိုပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များရှိပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်မရေမတွက်နိုင်သောအပိုပါ ၀ င်မှုများ
မည်သည့် Android keylogger မဆို Minspy ကိုအပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လျှင်၎င်းသည် Spyier ဖြစ်သည်။
သူလျှို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူအများအသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံး Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Spyier နှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များအမြောက်အများကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Forbes မဂ္ဂဇင်း, နေပြည်တော်, TechRadar
အစပိုင်းမှာတော့အဲဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလို့ပဲငါထင်ခဲ့တယ်။ Spyier ကိုစပြီးစမ်းကြည့်တော့ Spyier ကသူတို့ပြောသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုတကယ်ရထိုက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။
ပထမ ဦး စွာ Spyier တွင် Minspy ကသင်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနီးပါးနီးပါးရှိသည်။ target device ကို root လုပ်စရာမလိုပဲလာပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်း (သို့) ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကူးယူရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်သောဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Android လိုအပ်ချက်ကြောင့် keylogger ကို install လုပ်ဖို့လိုသေးတယ်။ ဒါတောင်မှ Android အတွက် Spyier App ကိုလုံးဝဖုံးကွယ်ထားလိမ့်မယ်။
Spyier နှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်သက်သောအရာအချို့ရှိပါသည်။
Spyier သည်သင် Spyier ကိုစတင်အသုံးမပြုခင်နှင့်သုံးစွဲသူအထောက်အပံ့ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် Spyier အမှတ်တံဆိပ်၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်စေပြီး application design သည်အသုံးပြုသူကိုအထူးရည်ရွယ်သည်။ ပြusuallyနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းဖို့ user support အမှုဆောင်တွေကိုငါများသောအားဖြင့်ရှာတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကူးစက်ခြင်းကိုသင်မပြုလုပ်လိုပါကအခမဲ့ရရှိသောမည်သည့် keylogger app ကိုမဆိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။ အလုပ်လုပ်သောခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာများသည် subscription plan သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်လိုင်စင်ကြေးနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
သင့်မှာအခမဲ့ keylogger option မရှိပေမယ့်အမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းများအကြားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Spyier keylogger သည်အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ရောက်ရှိပြီးငွေအတွက်အကောင်းဆုံးသောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချသည်။ ထို့အပြင်သင်အများစုကိုလျှော့စျေးရနိုင်သည်။
အခြား application များစွာ၏ dashboard များနှင့်မတူသည်မှာ Spyier ၏ dashboard သည်အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သင်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနာရီပေါင်းများစွာမရှာဖွေနိုင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုအင်္ဂါရပ်အားလုံးသည်သင့်ရှေ့မှောက်၌ရှိသည်။ ဘာမှမရှုပ်ထွေးသို့မဟုတ်ခက်ခဲသည်, သင်ပြyouနာရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Spyier သည် Minspy မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိုပါက Android keylogger ကိုရှာဖွေနေသူအားလုံးအတွက်အကြွင်းမဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကောင်းသောစကားလုံးပါရှိပြီး၎င်းကိုအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုမကျေမနပ်မမြင်ခဲ့ပါ။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အကောင်းဆုံး Facebook Messenger သူလျှို Apps ၁၀ ခု
Spyine Android spy app များ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းနှင့်ယနေ့အသုံးပြုနေသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Android ကိရိယာများအတွက်ပံ့ပိုးမှုပါရှိသည်။
Spyine ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာများသည်ပုံမှန် update များဖြစ်သည်။ Android ဗားရှင်းအသစ်ဖွင့်သည့်အခါတိုင်း Spyine သည်ကိရိယာအသစ်များ၊ အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့် operating system ဒီဇိုင်းများကိုထောက်ပံ့ရန်နောက်ဆုံးသတင်းများပါရှိသည်။
Spyine သည် Android keylogger များအနက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်လတ်ဆတ်သောဒီဇိုင်းရှိပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားသည်။ Spyine ၏လုံခြုံရေး protocol သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Spyine သည်နောင်တွင်ဤစာရင်း၏ထိပ်ဆုံး၌ရှိခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်အရသင်လတ်ဆတ်သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် Spyier နှင့်အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်ကျိန်းသေရှိသည်။ Spyier ကိုသုံးတဲ့အခါစိတ်ပျက်စရာဘာမှမရှိဘူး။
သူလျှို ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်လူကြိုက်အများဆုံး Android tracker ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အတော်လေးစိတ်ချရသောဖြစ်သည်။
Spyic ၏ဒီဇိုင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးမည်သည့်နေရာ၌ bug မျှမတွေ့ပါ။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုပုံမှန်မွမ်းမံပြီး၊ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကမှသင် Android ဖုန်းကိုမသုံးပါက Spyic က၎င်းကိုသေချာပေါက်ထောက်ပံ့လိမ့်မည်။
Android keylogger အပြင် Spyic သည် social media messenger များအတွက်အထူး module တစ်ခုလည်းရှိသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဆဲလ်ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်ခြင်းသည်လူများ keylogger အသုံးပြုလိုသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Spyic သည်ဤနေရာတွင်အဆင်ပြေပါသည်။
ဒါကြောင့် Spyic ကိုရှာဖွေချင်တဲ့လူတွေအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုပါ သူတို့ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းမပါပဲတစ်စုံတစ် ဦး ၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုစူးစမ်းပုံ.
Spyic သည်သင်၏ Android keylogging လိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏စာများကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အချိန်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်နေ့အချိန်ဘယ်လောက်ပဲရှိပါစေမင်းကိုဘယ်တော့မှစိတ်ဓာတ်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: အကောင်းဆုံး WhatsApp သူလျှို Apps များ
နင် Android keylogging အက်ပ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သူလျှိုဖုန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုသူအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောဒီဇိုင်းအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။
Cocospy ဖြင့်သင်၏ Android ဖုန်း၏ခလုတ်ရိုက်ချက်များကိုကမ္ဘာ့မည်သည့်နေရာမှပင်အဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပစ်မှတ်ထားသည့်ဖုန်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ကြိမ်သာဆက်သွယ်မှုလိုအပ်ပြီး၎င်းသည်မခက်ခဲပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် Android keylogger များကဲ့သို့ပင်သင်၏လုံခြုံရေးအချက်အလက်များဖြင့် Cocospy ကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေနေသူတိုင်းအတွက်ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာကြာမြင့်စွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့တာပါ။
Cocospy သည်အချက်အလက်လုံခြုံမှုနှင့်သင်၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားလျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သူပေးထားသောအင်္ဂါရပ်များသည်အခြားပေါ်ရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှမနိမ့်ကျပါ။ ၎င်းသည်ဖုန်းမော်ဒယ်အများစုကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
မိဘများသည် Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အဖြေများကိုရှာဖွေနေသောလူအများစုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Android keylogger app များသည်မိဘများကိုအထူးရည်ရွယ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Fami360 ထိုကဲ့သို့သော Android keylogging application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကမ္ဘာတဝှမ်းမရေမတွက်နိုင်သောမိဘများကသူတို့၏ကလေးများကို tabs များထားရှိရန်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သူတို့ဘာလုပ်နေသည်ကိုသိရန်အသုံးပြုသည်။
သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Fami360 ကိုရရန်နှစ်ကြိမ်မစဉ်းစားရန်လိုသည်။ အင်တာနက်သည်ကလေးများအတွက်လုံခြုံသောနေရာမဟုတ်တော့ပါ။ အဓိကအားဖြင့်သူတို့၏အားနည်းချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ Fami360 သည်သင်နှင့်သူတို့၏အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများကိုသင်မည်သို့စောင့်ကြည့်နိုင်မည်နည်း။
keylogger feature အပြင် Fami360 သည်သင့်ကလေးအားစောင့်ကြည့်ရန်စဉ်းစားသောအခါအသုံးဝင်သောအခြားရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ကိုလည်းပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လျှောက်လွှာမော်နီတာဖြင့်သင်၏ကလေး၏ဖုန်းတွင်မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ထားသည်ကိုလည်းသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များသည်လူကြီးများထက်သူတို့၏ privacy ကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားသောကြောင့် Fami360 သည်၎င်းကိုအပြည့်အဝကိုယ်ပျောက်ပုံစံဖြင့်အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်ပျောက်စနစ်၏အကူအညီဖြင့်သင့်ကလေးများကိုသူတို့မသိဘဲမျက်စိဖြင့်ကြည့်နိုင်သည်။
သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သူတို့၏ကလေးများ၏လုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် Fami360 ကိုအစောဆုံးရယူသင့်သည်။ ခေတ်သစ်မိဘများအားလုံးသည်၎င်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါသင်ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။
Mspy သည်အကောင်းဆုံး Android keylogger မဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လုပ်နိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သည်။ Fami360 ကဲ့သို့ပင် Mspy သည်၎င်းတို့၏ကလေးများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းကိုရှာနေသောမိဘများကိုသာရည်ရွယ်သည်။
Mspy သည် Android tracking နှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် Android keylogger သည်အခြားစာရင်းများနှင့်တူညီသည်။ သို့သော်၊ Mspy ကိုအသုံးပြုလိုပါကသင်မှတ်ထားရမည့်သေးငယ်သောသေးငယ်သောပုံနှိပ်စာလုံးရှိသေးသည်။
Mspy Android Keylogger နှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာသည်သင့်အား Android ဖုန်းကို root လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Android ဖုန်းကို root လုပ်ခြင်းဟာအရင်ကလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်လူအများစုအတွက်ပြeshနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ဖုန်းရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။
ထို့အပြင်သူတို့သည်သူတို့၏နည်းပညာနောက်ကျသောကြောင့်စျေးနှုန်းများကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့မဟုတ်ပါ။ Mspy ၏စျေးနှုန်းသည်ဤစာရင်းရှိအခြားသောစာရင်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။
ပစ်မှတ်ဖုန်းကို rooting မလုပ်ရင် Mspy ကိုသုံးနိုင်တယ်။ သင်၏ဖုန်းကို root လုပ်ခြင်းသည်သင်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ကိုသင့်ကလေးအားအသိပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိုစွန့်စားမှုကိုယူရန်ပြင်ဆင်ပါ။ ထို့အပြင်၊ Mspy နှင့်ဒေတာလုံခြုံရေးကိုလည်းကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
Hoverwatch သည်အဓိကမှတ်တမ်းမှတ်ရာများကိုခြေရာခံရန်စောင့်ကြည့်နေပြီးအခြားမည်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုအမှန်တကယ်အသုံးမပြုလိုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော Android ဖုန်းခြေရာခံဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
ဤစာရင်းသည်အခြားပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လူသိနည်းသောအမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Hoverwatch interface သည်သင်လိုချင်သလောက်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းဟာလူမှုမီဒီယာစာတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လည်းတောင်းဆိုတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အကြံပေးချက်များကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Hoverwatch ကိုအသုံးပြုရန်မဆုံးဖြတ်မီ၎င်းသည်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများကိုအသုံးပြုရန်သင်အကြံပြုသည်။
ဈေးနှုန်းအရ Hoverwatch သည်စာရင်းတွင်အကုန်အကျအများဆုံး app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့တဲ့အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတွေနဲ့အများကြီးနိမ့်ကျတဲ့စျေးနှုန်းအတွက်သင်လုပ်နိုင်တာကိုစဉ်းစားမိတယ်၊ အကုန်အကျများတဲ့အကြောင်းရင်းကိုငါတွေးမိတယ်။
Hoverwatch မှာ Android keylogger ဖြေရှင်းချက်ရှိပြီးသင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်၊ သင်ကနောက်ထပ်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သောဆဲလ်ဖုန်းမော်နီတာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်အခြားနေရာကိုသင်ကြည့်သင့်သည်။ ထို့အပြင်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်အခြားသူများထက်များစွာမြင့်မားသည်။
Spyzie ဆိုတာအင်တာနက်ပေါ်မှာ Android keylogger တွေကိုအချိန်များစွာသုံးပြီးရှာဖွေမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်မှာပါ။
Spyzie သည်ကောင်းသောနည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးမကောင်းသောအကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Android keylogger သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ သင့်အားမည်သည့်ပြproblemsနာမှမပေးသင့်ပါ။
ဒီ interface ကချောချောမွေ့မွေ့နဲ့သုံးရလောက်အောင်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Spyzie ဟာမကြာခဏမွမ်းမံချက်တွေကိုထုတ်ပေးနေတုန်းမှာပဲ၊ သူတို့ဟာအားနည်းချက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Android keylogger ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်အတွေ့အကြုံကောင်းမရှိပါကသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Spyzie သည်စာရင်း၏စျေးအကြီးဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးရွေးခကြေးအစီအစဉ်များကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကုန်ကျသော subscription အစီအစဉ်များရှိသည်။
ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုစိတ်ထဲထားရှိပြီး Spyzie သည် Android keylogger ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးညံ့ဖျင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော app interface ဖြစ်သည်။ မကောင်းတဲ့ interface နဲ့စိတ်ဓာတ်မကျပါကငွေသည်သင့်အတွက်အချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါက Spyzie ကိုဆက်လုပ်သင့်သည်။
Spybubble သည်လူသိနည်းသော Android keylogger app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ Spybubble သည်အမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်သောလိမ်လည်မှု application နှင့်တူသည်။
သို့သော်၊ သင်စမ်းကြည့်လျှင် Android ဖြေရှင်းချက်သည်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ အခြားသောကိရိယာများမှသင့်အား Android ခလုတ်ရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဒီဇိုင်းညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်ဤသော့မှတ်တမ်းကိုဖတ်ခြင်းသည်ပြaနာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဂိမ်းတွင်ရှိနေပြီး interface တွင်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းသည်အဆုံး၌ကတိက ၀ တ်ကင်းမဲ့မှုကိုဖော်ပြသည်။ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်မှ Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သူအများစုသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့် Spybubble သည်ဤစာရင်းတွင်သူကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ရန်နေရာတစ်ခုရရှိသည်။
Spybubble အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ အဆိုးဆုံးအခြေအနေ၌သာ Spybubble ကိုသုံးပါ။ တခြား app တွေအားလုံးကိုစမ်းကြည့်ပြီးရင် Spybubble ကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် အကောင်းဆုံးသူလျှို Apps ၁၀ ခု
သင်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်သည်ဤစာရင်းကိုအကောင်းဆုံးစာရင်းမှစီစဉ်ပြီးထို မှနေ၍ ဆင်းလာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုတည်ဆောက်လိုပါကအောက်ပါအချက်များကိုစဉ်းစားသင့်သည် -
ငါဒီနေရာမှာငါပြောတဲ့ apps အများစုဟာ root မပါဘဲအလုပ်လုပ်ကြပေမဲ့၊ ဒီစာရင်းထဲက app အချို့ (နှင့်ဒီ list ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ apps များ) က Android ပစ်မှတ်ကို root လုပ်ဖို့တောင်းလိမ့်မယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်အမြစ်တွယ်ခြင်းကိုသင်ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ Root လုပ်ခြင်းသည်ပြaနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အမြန်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။
ကောင်းမွန်သော Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သူအများစုသည်အပိုထည့်စရာမလိုဘဲ၊ အပိုအင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ အင်္ဂါရပ် ၃၅ ခုထက်ပိုသော Minspy အမှုကိုယူပါ။ သင်အသုံးပြုလိုသည့် Android keylogger ၏အင်္ဂါရပ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
အခြားအရာများနှင့်မတူသည့်အချက်မှာ Android keylogger app ၏စျေးနှုန်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုထင်ဟပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှအကောင်းဆုံး Android ခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာများသည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီး၎င်းအိတ်ဆောင်ကိုသွားမည့်ထိုစာရင်းတွင်ပင်ဖော်ပြခြင်းမရှိသောအသုံးမကျသောခလုတ်မှတ်တမ်းမှတ်သည့်အရာများရှိနေသည်။
ထိုသို့ပြောပြီးနောက်သင်အသုံးပြုလိုသော Android keylogger ၏စျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားပါ။
ကျွန်ုပ်သည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ သင်လည်းထိုသို့ပြုလုပ်ပါကအသုံးမပြုမီ app interface ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည် iPhone အတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှို App ၁၀ ခု
A: မဟုတ်ပါ၊ အခမဲ့ Android keylogger များအမှန်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါ။
ဖြေ - မဟုတ်ဘူး။ သင်မည်သည့် Android keylogger ကိုသုံးနေသည်ကိုအရေးမကြီးပါ၊ ၎င်းကိုပစ်မှတ်ဖုန်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ရန်မှာမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ သို့သော်၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်သင်၏ငွေကြေးသို့မဟုတ်အချက်အလက်များကိုခိုးယူရန်လိမ်လည်မှုများဖြစ်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအကြားတစ်ခုစီတွင်သိသာထင်ရှားသောအားနည်းချက်များရှိသည်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအက်ပ်သည်သင့်အားအသုံးပြုသူအဖြစ်ထားရန်သင့်အားအသစ်သောအသစ်အဆန်းများကိုဆောင်ကျဉ်းပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထို့အပြင်တစ်ကြိမ်တည်းလိုင်စင်ကြေးသည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်။
A: ဒီစာရင်းထဲကအထူးသဖြင့်ထိပ်ဆုံး (၆) ခုမှာ stealth mode နဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် Android lock logs တွေကိုသူတို့မသိဘဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ယခုငါအကောင်းဆုံး Android keylogger များအကြောင်းနှင့် Android keylogger ကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်ကိုပင်ပြောပြပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်အလုပ်ပြီးပြီ။ ယခုသင်သည်သင်၏အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Android keylogger ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုစတင်အသုံးပြုပါ။ သင့်အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့အားအသိပေးပါ။
keylogger ဆိုတာဘာလဲ။ သင်ရိုက်ထည့်လိုက်သောအရာအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သူကဘယ်လိုစောင့်ကြည့်မလဲ
နောက်ဆောင်းပါးအကောင်းဆုံး Snapchat သူလျှို 10